KuFulfilPanda, yedu yekuzadzisa mari inozadzisa kuitisa uye kugadzirisa backer mibairo yechaunga chakabhadharwa mishandirapamwe paIndiegogo, Kickstarter, zvichingodaro. Inokurumidza, nyore, inokwanisika, uye inyore.
Mubasa redu rekuzadzisa mari isu:
● Kukupa quote nemutengo unofungidzirwa wekutumira.
● Tumira zvinhu zvako kudura kuChina kana kuUSA
● Rongedza uye tumira odha dzako. Unogona kusarudza chero mutakuri sezvaunoda seDHL, FedEx, UPS, USPS, China EMS, nezvimwe.
● Kukupa iwe yekutevera manhamba, kuti ugone kuteedzera yako odha.
● Unogona kutibata nesu chero nguva paunenge uchitida. Taura nesu takasununguka!
Crowdfunding Kuzadzikiswa Services
Sevhisi yedu pano kuFulfilPanda inonyanya kugonesesa mibairo uye mukuzadzisa mirairo yemisangano yakazara nevanhu kuburikidza Indiegogo, Kickstarter, uye mamwe mapuratifomu ekubhadhara mari. Neboka redu ratinovimba, tichabata manejimendi ekuverenga, kurongedza, kutora, uye kutumira chigadzirwa chako chaibhadharwa online. Isu zvakare tine zviwanikwa zvinozobata basa racho zvakanakisa uye zvakanakisa zvisinei nehuwandu, saizi, kana chimiro chezvigadzirwa izvo zvinoda kutorwa, kurongedzwa, uye kutumirwa kamwechete.
Uyezve, mumabasa edu ekubhadhara mari, isu tinosimbisa sevhisi yedu zvakadzama kuti unyatso kupa izvo zvaunoda kuzadzisa mushandirapamwe wako vanotsigira uye mirairo zvinobudirira
Kugadzira kutumira uye kugadzirisa backer mibairo yechaunga chakabhadharwa mishandirapamwe paIndiegogo, Kickstarter, uye zvichingodaro nekukurumidza, nyore, kudhura, uye zviri nyore ndicho chinangwa chedu mubasa iri.
Inodhura uye Flexible Kutumira Mhinduro
Inodhura uye inoshandisika kutumira iyo inopa yakanyanya kukosha mari yako ndiko kupihwa kwedu kwauri. Tine nzira dzakasiyana siyana dzekutakura kubva pane inononoka uye yakachipa kusvika kune inokurumidza uye yakavimbika. Isu tinokupawo iwe sarudzo dzemhando yekutumira,zvinoenderana nemari yako yebhajeti. Nekudaro, iwe unowana kutonga kwakazara pamusoro pemutengo wekutumira.
Kunyangwe iwe uri kutumira zvigadzirwa zana kana 10,000 zvigadzirwa, iwe unogona kugara uchitora mukana wezvedu zvinodhura uye zvakadzikiswa sarudzo dzekutakura. Pamusoro pazvose, iwe zvakare une runyararo runodikanwa rwepfungwa iyo inotsigira mibayiro kana zvigadzirwa zvichaunzwa nenguva uye mune yakanakisa mamiriro. Kutakura kwedu nekukurumidza uye kwakavimbika kunovimbiswa kupa 100% kugutsikana kwevatengi.
Akavimbika uye Akanakisa Services
Uye zvakare, isu tinonzwisisa kuti mubairo wekuzadzisa mubairo ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kunetsa zvemushandirapamwe wevanhu vazhinji. Yedu nyanzvi nyanzvi uye yakatsaurirwa rutsigiro timu ichave iripo kubatsira, kutsigira, uye kukupa iwe zvese zvaunoda kuti uve nechokwadi chekuti iyo crowdfunding yekuzadzikiswa maitiro anotendeuka mushe mushe uye zvisina kunetsa. Iwe unogona kugara uchivimba nesu kune akavimbika uye akanakisa emari yekuzadzisa masevhisi masevhisi.
Kuwedzeredza Hunyanzvi Hwedu uye Hupo Hwepasi Pose
Kupa isina musono, yakanaka chiitiko kune yako crowdfunding mushandirapamwe musana inovimbisa kuti ivo vanofarira kukutsigira iwe kune ramangwana eCommerce kana vanhu vakawanda ekuedza. Rutivi rwekugadzirisa kurongedza, kunhonga, uye kutumira iri pakati pechikamu chakakosha kwazvo cheiyo mibairo yekutsigira.
Regedza hunyanzvi hwedu uye kuvepo kwepasirese kuona kuti yako yekutsigira mibairo uye kurongeka kuzadzikiswa kutendeuka kubudirira kwedu. Iwe unogona kugara uchitora mukana weichi chivakwa padyo nenzvimbo dzako dzekugadzira muAsia kana avo vari padyo nevanokutsigira nevatengi muUnited States.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve yedu yakazara mari yekuzadzisa masevhisi, taura nesu nhasi kuFulfilPanda. Isu tinogadzirakunhonga, kurongedza, uye kutumira backer mibairo uye zvigadzirwa zvehukuru hwakasiyana uye maumbirwo. Masevhisi edu anokurumidza, akajeka, uye akavimbika kwazvo. Chikwata chedu chakazvipira chichavepo kuti vataure newe uye vape mhinduro dzakakodzera kumibvunzo yako nezvinonetsa. Kana zvasvika pakubata zvinhu zvine hungwaru pamushandirapamwe wako wekubhadhara mari, unogona kugara uchititarisira pamasevhisi akatanhamara uye asina kuenzaniswa.